Anofara Mahoridhe kubva kuBLOB Chikwata chedu! | Karman® Mawiricheya
Teerera kuna Jingle Mabhero akaitwa naBlob Opera. Wobva waridza ina opera manzwi kuti ugadzire yako yekuumbwa? https://t.co/3JzaP1hhF7 Via @googlearts
- Karman Hutano (@KarmanHC) December 17, 2020
Posted by Nhoroondo ye Karman Healthcare Inc. on Chishanu, December 18, 2020
Tamba pane yako smart foni izvozvi! Zvakanaka chaizvo
kupinda Izvi re muna Mawiricheya asingaremi, Retail, hwiricheya, Wiricheya Nhau, kufamba newiricheya uye tagged isina kurema wheelchair, kufamba, anogara pazvigaro, wiricheya, nhau dzewiricheya, mavhiripu.